पल कतिसम्म जिम्मेवार छन् ?
मङ्गलबार, १३ फागुन २०७६
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ३१, २०७६१४:४०
फिल्म । अभिनेता पल शाहको क्रेज राम्रै छ । किनकी उनको स्टारडमलाई उनको फ्यान फ्लोअर्सले प्रस्ट्याउछ । उनले म्युजिक भिडियो हुँदै आफुलाई फिल्मसम्म ल्याईसकेका छन् । सम्पादकबाट मोडल बनेका पललाई बेलाबखतमा आरोप पनि लाग्ने गर्छ , उनले भिडियोलाई बढी समय दिन्छन । किनकी करोड बढी लगानी गरिएको फिल्मलाई पर्ने असरको ख्याल नगर्दै उनि लाखको भिडियोमा रमाउछन् । त्यसो त उनको फिल्म हिट हुन् , गीतसंगीतले साथ् दिने गरेको छ । उनि अभिनित फिल्म तिनै हिट भएका छन् , जसको गीतसंगीत दर्शकको जिब्रोमा झुण्डिएको छ ।
यिनै पल पछिल्लो समय फिल्म ‘बीर विक्रम २’ मार्फत दर्शक सामु जेठ ३ मा आउंदैछन् । पछिल्लो रिलिज शत्रु गतेपछी उनि ठुलो पर्दामा देखिएका छैनन् । त्यसैले पनि यो फिल्म उनको लागि खास छ । तर , पललाई भिडियोमा भने धेरै नै देखिने गर्छ । उनको भिडियो साता अन्तरमा आइनै रहेका हुन्छन् । यिनै पललाई फिल्मको माया कति छ ? यो त उनैले जानुन , तर फिल्मकर्मीले भने उनीमाथि खुलेरे लगानी गर्ने गर्छन् । झन्डै डेढ करोड बढीको लागतमा निर्माण भएको फिल्म ‘बीर विक्रम २’ मा मुख्य भूमिकामा पल नै छन् ।
उनलाई दर्शकले बीरको भूमिकामा देख्न पाउनेछन् । केहि समयको ग्यापलाई भने उनले राम्रो फिल्मको पर्खाइ भनेका छन् । ‘म माथि दर्शकको विश्वास छ , त्यसैले जुनसुकै फिल्म गर्ने मुडमा थिइन् र समय लाग्यो’ उनि भन्छन् ‘मलाइ समिक्षक र पत्रकारलाई गल्ती औल्याउँन न दिउ जस्तो लाग्छ , त्यसैले सोच विचार गरेर प्रोजेक्ट गर्छु ।’
स्क्रिप्ट, आफ्नो भूमिका र टिम राम्रो लागेपछि यो फिल्म गर्न राजी भएको उनले बताए । ‘यसमा मैले गर्न खोजेको भूमिका निर्वाह गरेको छु’ उनले भने ‘कहिले कहिँ स्क्रिप्ट राम्रो भएर नहुने रैछ , टिम नै राम्रो चाहिने रैछ ।’ उनले स्टोरीलाई पर्दामा देखाउन सक्ने मेकर पनि चाहिने बताए । पलले यसरि तारिफ गरिरहदा उनले फिल्मलाई कति महत्वपूर्ण रुपमा लिएका छन् ? यो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । किनकी एकतर्फ उनको म्युजिक भिडियो निरन्तर आइरहेको छ भने अर्को तर्फ उनको फिल्मको गीत । यस्तो अवस्थामा के दर्शक झुक्किदैनन् र ? के फिल्मको पब्लिसिटी भएको बेलामा पलले भिडियो नगर्दा हुदैन र ? पलजी आफ्नो फिल्मलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पनि लाग्ने कि ड्युटी समर काम मात्र गर्ने ?
चितवनमा रुचाईयो ‘चौका दाउ’
रत्नसँगै शान्तिप्रियलाई ‘नवीन कला सम्मान’
सेल्फी किङ्ग : हाँस्य कलाकारको कला यात्राको भोगाइ
‘हिउ सरी’मा पुष्प र सुमी (भिडियो)
अमेरिकामा देखाइयो ‘मिस्टर नेपाली’
टप तिनमा ‘अनमोल , सलिन र विपिन’
आँचलले प्रेमी उदिपसँग गरिन् टिकाटालो
हिजो आजका कुराको ‘माया जदौ’ सार्वजनिक (भिडियो)
अनमोलले साइन गरे नयाँ फिल्म ?
‘धुपौरे’ मा अनमोलको ठाउँमा को ?
‘परदेशी २’ मा केकी पनि
आमालाई दर्शकको साथ
इमेल : jayhosmediapvtltd@gmail.com